‘प्रधानमन्त्री उदार भएपछि राजकिशोरलाई मन्त्री बनाउनु के ठूलो कुरा हो र!’ - SYMNetwork
२०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार २०:३२ by Senior Editor Nima
बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न खबर बाहिरियो। ओली मन्त्रिपरिषदमा सात मन्त्रालय खाली थिए त्यसैका लागि उनले एमालेका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन लागेका होलान् भन्ने धेरैको आँकलन थियो। किनकी सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ-राजेन्द्र समूहबाट अघिल्लो साता नै मन्त्री भइसकेका थिए।
ओलीले बिहीबार थप्न लागेका मन्त्रीमध्ये उद्योग वार्णिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीमा जसपा नेता राजकिशोर यादवको नाम आएपछि धेरैलाई आश्चर्य लाग्यो।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने क्रममा यादवको नामबाहिर आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका एक स्थायी कमिटी सदस्यलाई सोध्दा उनले यादवको नाम चर्चामा रहेको बताए।
मन्त्रीको नाममा चर्चामा आएका राजकिशोर यादव जसपाकै हुन् या एमालेका कोही नेता हुन अलि कन्फ्युज भइयो भनेर सोध्दा ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘कन्फ्युज हुने होइन। एमाले त एकदम उदार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि साह्रै उदार हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री उदार भएपछि राजिकशोरलाई मन्त्री बनाउनु के हो र!’
‘राजकिशोरलाई मन्त्री बनाउने भएछ, थाहा भएन। बनाँउछ र? प्रधानमन्त्रीलाई कुरा त गरिराथे,’ ठाकुरनिकट एक नेताले भने,’उनलाई प्रधानमन्त्रीले वचनवद्धता गर्नुभएको थियो होला पहिलादेखि तर हामीले पार्दिएनौं त्यसैले होला। पार्टीमा त्यो विषयमा कुरा भएकोसमेत थाहा पाइएन।’
‘उतै जान्थे होलान्। असन्तुष्टि स्वभाविक हो,’ ती नेताले भने,’के मन्त्री बनाउँदैछ? उद्योग वाणिज्य मन्त्री नै हो र, ल गर्वै भएछ त।’
‘पार्टीको आन्तरिक किचलो तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ। सबैतिर बहुमत पुर्‍याउनै पर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले अलिकति सहयोग गर्दिनुभएको हो,’ ती नेताले भने,’अहिले यत्ति नै बुझौं। यो मन्त्रिपरिषदको आयु कति लामो छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। फेरि पुनर्गठन हुन्छ। त्यसपछि एक चरणको प्लस माइनस फेरि हुनेवाला छ।’
‘उहाँ त मन्त्रीको रेसमा हुनुहुन्थ्यो। राजपा फुटाएर भए पनि सरकारमा जानुपर्छ भनेर नेतृत्व गर्ने मान्छे हो,’ उनले भने,’प्रधानमन्त्रीले राजकिशोरलाई भन्दा पनि महन्थजीलाई नै रूचाएको हो। अहिलेको परिवेशमा उहाँले महन्थजीलाई सहयोग गर्न खोज्नुभएको छ। महन्थजीलाई अप्ठेरो नपरोस् भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ।’
‘हिजो मात्रै पनि हाम्रा साथीहरूसँग राति अबेरसम्म छलफल भएको थियो। उनी हामीसँगै आउँछन् भन्नेमा ढुक्क थियौं। तर आज एकाएक मन्त्री बनेका छन्,’ उपेन्द्र यादवनिकट एक नेताले भने,’राजकिशोर हामीसँग नआएर केही हुँदैन। किनकी हाम्रो बहुमत उनी नहुँदा पनि पुग्छ। तर उनले हाम्रो केही रणनीति भने थाहा पाएका छन्। जसले गर्दा हाम्रो समूहमा आउन लागेका ठाकुर समूहका केही नेतालाई रोक्न सक्ने खतरा छ।’
Prevगुण्डा नाइके गणेश लामा पोखराबाट पक्राउ
nextसुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट थप ६ जनाको मृत्यु